स’म्भोगअघि महिला-पुरूषले जान्नैपर्ने १० कुरा ! - Sawal Nepal
२०७७ जेष्ठ ११, २१:५३
यौ’न मानिसका लागि आधारभूत आवश्यक्ता हो । तर, हाम्रो सामाजमा यौ’न जीवनलाई खुल्ला राखिएको छैन । यही अवस्थामा मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ’न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी प्रस्तुत गरेका छाै ।
यी १० उपाय जस्ले यौ’न जिवनलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्याउछ :
–स’म्भोगका बेला यदि जोडीको मुड ख’राब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर स’म्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर गर्नु राम्रो हुँदैन ।
–एक–अर्कामा शारी’रिक एवं मा’नसिक रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
–यौ’नस’म्पर्कका बेला हरेक कुरालाई ग’म्भीर रूपले लिनु हुँदैन । अ’न्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु उचित हुन्छ।
–स’म्भोगका विषयमा तपाईं वा जोडीको मनमा केही शं’का भएमा पहिले त्यसलाई हटाएर मात्र स’म्भोगको सिलसिला अघि बढाउनुपर्छ ।
–सम्भो’गका दौरानमा जोडीको सन्तु’ष्टिको ख्याल गर्नुहोस् ।
–सम्भो’गका बेला पा’क्क्री’डामा बढि जोड दिनुहोस् । यसले जोडीलाई बढी च’रमसु’ख प्राप्त हुन्छ ।
–स’म्भोगका बेला कम बोल्नुहोस् र आफ्नो जोडीप्रति एकाग्र हुनुहोस् र उनका कुरा पनि सुन्नुहोस् ।
–स’म्भोगलाई निरन्तरता दिइराख्नुहोस् । स’म्भोगमा धेरै अन्तराल राख्नु राम्रो होइन ।
–हरेक स’म्भोगका बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला ।
थप समाचार- विवाहपछि युवतीमा देखिने अनाैठा ७ परिवर्तन !विवाहपछि युवतीहरु आफ्नो जन्म घर छाडेर नयाँ घरमा जान्छन् । उनिले विवाहसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँदैनन् सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएका हुन्छन् ।छोरीबाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । विवाहपछि महिलाहरुमा हरेक कुरामा परिवतर्न आउँछ । उनीहरुको सोचाइ, बोल्ने, शैली, खानपान रहनसहनदेखि हरेक कुराहरु बदलिंदै जान्छ ।
१. शरीरमा ला’परवाहीविवाह भन्दा पहिला युवतीहरुले आफ्नो फिगरलाई विशेष ध्यान दिने गरका हुन्छन् । राम्रो फिगरका लागि खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् । उनीहरु विवाह भन्दा पहिला शरीरलाई स्फूर्त राख्नका लागि निकै मिहेनत गर्छन् तर विवाह पछि कसलाई देखाउनु छ र ? भन्ने सोचाइले पनि वेवास्ता गर्छन् ।
२. कामको चाप;विवाह भन्दा पहिला घरमा सबै काम गर्ने युवती विवाह गरेपछि केही अल्छि हुन्छन् । उनीहरुको लागि विवाह गरेर गएको घरमा काम गर्ने मानिसको सहायता चाहिनेसमेत हुन जान्छ । विवाह पछि उनीहरुको ब्यस्तता पनि बढ्छ अनि ध्यानपनि अन्तै केन्द्रित हुन जान्छ ।
३. हिसाब किताब;विवाह भन्दा पहिला घरायसी खर्चमा कुनै वास्ता नराख्ने युवती विवाह गरेर गएपछि भने आर्थिक कारोबारमा सक्रिय बन्न खोज्छन् । विवाह भन्दा पहिला बैंकमा खाता नहुने र खोल्ने आवश्यकता नठान्नेहरुले समेत विवाहपछि बैंकमा खाता खोल्छन् भने घरायसी हिसाबकितामा पनि सक्रियता जनाउँछन् । जसले गर्दापनि उनिहरूमा परिवर्तन देखिन्छ ।
४. आमालाई फोन;विवाह भन्दा पहिला कतै गएको बेलामा आमाले फोन गरेमा झर्कने छोरीले विवाह गरेपछि आमालाई आफैं फोन गर्छन् भने आमाको फोनको प्रतिक्षा गर्छन् । विवाहपछि आमालाई धेरै महत्व दिने र विवाह गरेर गएको घरको आमा(सासू) र परिवारलाई कम महत्व दिने भएका कारण पनि कयौं घरहरुमा वि’वाद हुने गरेको छ ।
५. नन्द जेठानीसँगको प्रतिस्पर्धा :विवाह भन्दा पहिला बहिनी वा भाउजु वा अरुले के लगाए वा के किने भन्ने कुरामा युवतीको खासै चासो रहँदैन । आफूलाई मन परेको र मर्जी अनुसारका कपडा र अन्य गरगहनामा चासो राखेका हुन्छन् तर विवाह गरेर गएपछि नन्द वा जेठानीसँग प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । कपडा, स्टाटस फेसन लगायत हरेकमा नन्द जेठानीसँगको प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । नन्दले वा जेठानीले यसो गरिसकी भन्दै उनीहरुको मन शान्त रहन सक्दैन । तर यो सबैमा लागू नहुनपनि सक्छ।
६. सुखी पत्नी र दुखी पति :विवाहभन्दा पहिला पुरुषको मन पर्ने बानी पनि विवाहपछि युवतीलाई मन पर्न छोड्छ । विवाह गरेर गएपछि युवतीका लागि आफ्नो भाइ संसारकै सबैभन्दा दुखी पति लाग्छ भने बहिनी, जेठानी र नन्द जस्ता महिला सबै भन्दा सुखी लाग्छ ।
७. पतिसमक्ष गुना’सो :हरेक युवतीले विवाहपछि गुना’सो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गु’नासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नियमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवतीमाथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् ।पारिवारिक झ’मेला, स’म्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने सम’स्या नै पर्दैन । र दाम्पात्य जीवन सुखमय बन्नसक्छ।